Bayern Munich oo Xasuuqday Kooxda SC Paderborn – Radio Muqdisho
Bayern Munich oo Xasuuqday Kooxda SC Paderborn
Kooxda SC Paderborn ayaa waxaa garoonkeeda Energieteam Arena ku xasuuqay oo 0-6 uga badiyay kooxda Bayern Munich.
Ciyaaryahan Robert Lewandowski ayaa labo ka mid ah goolasha qeybtii hore u dhaliyay kooxda Bayern Munich,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Florian Hartherz ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Paderborn.
Kooxda Bayern Munich ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta labo ka mid ah afarta gool u dhaliyay ciyaaryahan Arjen Robben,halka labada gool ee kale ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kala ah Franck Ribery iyo Mitchell Weiser.
Kooxda Bayern Munich ayaa horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ku hogaamineyso ku hogaamineyso 55-dhibcood,halka kooxda Paderborn ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 23-dhibcood.
Kooxda Schalke 04 ayaa garoonkeeda Veltins-Arena barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Werder Bremen.
Kooxda Schalke ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Max Meyer.
Ciyaaryahan Sebastian Proedl ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda Werder Bremen.
Kooxda Schalke ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta afarad,waxana ay leedahay 35-dhibcood,halka kooxda Werder Bremen ay horyaalka uga jirto kaalinta sideedaad,iyadoo leh 30-dhibcood.
Kooxda FC Augsburg ayaa garoonkeeda SGL arena barbardhac 2-2 ah kula gashay kooxda Bayer Leverkusen.
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa waxaa labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Josip Drmic iyo Stefan Reinartz.
Kooxda FC Augsburg ayaa waxaa labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Caiuby iyo Marwin Hitz.
Kooxda FC Augsburg ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 35-dhibcood,halka kooxda Bayer Leverkusen ay horyaalka uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 33-dhibcood.
Kooxda Malaga oo Camp Nou uga Adkaatay Barcelona
Manchester City oo Xasuuqday Newcastle United,Una Soo Dhawaatay Chelsea “SAWIRRO”